Micro နဲ့ထိုး Fetilizers သည်တစ်ဦးကကိုကာကိုလာ Cap အသုံးပြုခြင်း
သင်ဒီမှာပါ: Home / Fertilizing Solutions / ဓာတုပစ္စည်းများ / Micro နဲ့ထိုး Fetilizers သည်တစ်ဦးကကိုကာကိုလာ Cap အသုံးပြုခြင်း
16 / 04 / 2015 By ရော်ဂျာ Pilon2မှတ်ချက်
ကျနော်တို့ဓာတ်မြေသြဇာသုံးစွဲဖို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလယ်သမားကိုရပ်တန့်နိုင်ပါသလား? မဖြစ်နိုင်တာမစ်ရှင်ညာဘက် ?? !! ဘယ်လို6ကြိမ်လျော့နည်းစေရန်ဓာတ်မြေသြဇာတက်လျှော့ချကော?
အယ်ဒီတာ FROM မှမှတ်ချက်
ငါဓာတုဓာတ်မြေသြဇာကိုကြိုက်ကြဘူး။ ကာလ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ၏၌စိတ်ဝိညာဉ်အား Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းကကမ္ဘာဂြိုဟ်ကောင်းမွန်သည်ထက်အချိန်နည်းသည်ဓာတုပစ္စည်းများဓာတ်မြေသြဇာ,3မှ6သုံးစွဲဖို့အဖြေတစ်ခုရှိလျှင်။ ငါ Micro-ဟောဒီမှာဓာတ်မြေသြဇာနှင့် ပတ်သက်. ဤဆောင်းပါးကိုထုတ်ဝေဖို့ဆုံးဖြတ်အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။
ရော်ဂျာ Pilon, Editor ကို - အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်း
သင်တစ်ဦးတီထွင်ဆန်းသစ်မှု, စနစ်, fix နိုင်ကြောင်းတီထွင်မှု, အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေ, ကယ်ဆယ်ရေးမိခင်ကမ္ဘာမြေကိုသိသလား?
Excellent diaporama from BBC News – နိုင်ဂျာအတွက်မွတ်ခေါင်းပါးမှု-ရိုက်နှက်လယ်ယာစိုက်ပျိုး: ရုပ်ပုံများခုနှစ်တွင်!
Documentation – အာဖရိကမှာတော့ Micro နဲ့ထိုး Fertilization အသုံးပြုခြင်း
Filed under: ဓာတုပစ္စည်းများ, Fertilizing Solutions အတူ Tagged: ကင်ညာ